बैदेशिक रोजगारमा जानेले खोप लगाउन के के डकुमेन्ट चाहिन्छ ? – List Khabar
Home / समाचार / बैदेशिक रोजगारमा जानेले खोप लगाउन के के डकुमेन्ट चाहिन्छ ?
admin July 14, 2021 समाचार Leaveacomment 63 Views
काठमाडौं : सरकारले बैदे’शिक रोजगारमा जाने युवालाई कोरोनाको खोप लगाउने भए संगै अर्को चर्चा चुलिएको छ । बैदेशिक रोजगारमा जाने युवा र बैदेशिक रोजगारबाट छुट्टीमा आएका नेपाली कामदारहरुलाई स’रकारले कुन आधारमा र के के डकुमेन्टको आधारमा खोप लगाउने अनुमती दिन्छ ।
यो नै अहिले धेरैको प्रश्न रहेको छ । मलेसिया, साउदी अरबिया, दुबै, कतार, ओमान , कोरिया, टर्की जस्ता देशमा रोजगारिको लागि जाने नेपाली युवा’लाई रोजगार दाता देशले कोरोनाको भ्याक्सिन पहिलो सर्तको रुपमा राखे संगै रोजगारमा जाने युवा’लाई भ्याक्सिन दिनु पर्ने माग उठ्दै आएको थियो ।
खोप नपाएकै कारण बिदेश’को रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको बेला सरकार’ले भेरोसेल खोप र जोनसोन एण्ड जोनसनको खोप दिने तयारी गरेको छ । भने बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु र बैदेशिक रोजगार’बाट छुट्टिमा आएका तर बिदेश फर्कनु पर्ने युवाहरुको लागि भ्याक्सिन दिन थालिएको छ ।
सबैले खोप नपाएको अवस्था
अहिले नेपालमा सबैजनाले खोप पाएका छैनन् । खोप नपाएको अवस्थामा कोरोनासँग लड्न सक्ने प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको हुँदैन जसका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च छ ।
सबैजनाले खोप नलगाइसकेको अवस्थामा विश्वले नै चासो देखाइरहेको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिनु, सामाजिक दुरी कायम नगर्नु, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सही तरिकाले पालना नगर्दा अझैपनि जोखिम कायम छ ।
हामी सैदान्तिक कुरा गरिरहेका छैनांै र हामी अहिले यस्तो होला की भनेर कल्पना पनि गरेका छैनौ, वास्तवमा यो भइरहेको छ । कतिपय देशहरुमा संक्रमण फेरि उकालो लागिरहेको छ । त्यसैले हामीसँग भएका उपायलाई अवलम्वन गरि संक्रमण न्यून राख्न सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ, हामी विवेकशिल हुनैपर्छ ।
हामीले व्यक्रिगत तहमा भौतिक रुपमा उपिस्थत हुँनाले संक्रमण बढ्ने भएकाले सम्भव भएसम्म फोन र इन्टरनेटमार्फत सम्पन्न गर्न सकिने काम भए त्यसरी नै गरौं, भेटघाटलाई बढावा नदिऔं । साथै सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनाहरुमा भर नपरौं । कतिपय सूचना र समाचार भ्रामक पनि हुन्छन् त्यसैले सूचनाको स्रोतको आधिकारिकता तर्फ ध्यान दिऔं ।
(आइतबारको प्रेस ब्रिफिङमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रका निर्देशक डा. राधिका थपलियाले प्रस्तुत गर्नुभएको धारणाको केही अंश ।)
Next राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक शैली- प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शप थलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई बधाई समेत नदिई राष्ट्रपति भण्डारी बाहिरिन |